I-Twitter Brand Faux Pas | Martech Zone
I-Twitter Brand Faux Pas
NgoMvulo, Agasti 24, 2009 NgeCawa, Agasti 2, 2015 UAdam Omncinci
Kukho le ndoda inye kwi-Twitter engalandeli kwaye indilandele kwinto ebonakala ngathi yeyeveki. Ndicinga ukuba uyakholelwa ukuba ndiza kumlandela ngequbuliso (kuba andinaxesha lokugqibela lama-27 azamile.). Kuya kufuneka acinge ukuba ndiyenzile iakhawunti yam okanye ndiyigusha eza kucofa landela nakubani na ondilandelayo.
Khange ndimlandele umva okokuqala kuba ndijonge ixesha lakhe kwaye andiboni nto inexabiso ngqo kum. Ayikuko ukuba wayethetha into embi okanye etyhala iphonografi. Andinamdla kwimveliso ayithengisayo, akekho ebaleni lam, akathethi kwanto endiyifumanayo inomdla, kwaye akanguye walapha-zonke iindlela endizisebenzisayo ukwenza isigqibo sokuba ndiza kulandela umntu okanye hayi. (Akunyanzelekanga ukuba uhlangane nazo zonke iikhrayitheriya; inye kuphela.)
Andinawo amanani alandelayo amakhulu, kodwa ke uthini? Andifuni manani makhulu kuba ipholile. Nangona kunjalo, ukuza kuthi ga ngoku ndimhoyile lo mfo. Kwisikimu sonke sezinto ngokwenene kukucaphukisa okuncinci njengaleyo ingcongconi ibonakalise kwindawo yokutya. Kodwa yile nto-ndiqala ukumbona lo mfana engenanto ngaphandle komlingo.
Ngokwenyani, ukhona ukonakalisa uphawu lwakhe nomntu ukuba ubonakala elangazelela ukurhintyela. Ngelixa kuqala ndambona njengosomashishini osemthethweni kunye nemveliso efanelekileyo engandithandiyo, ngoku ndimbona njengesilwanyana esidlayo esingasoze ndasincoma emphefumlweni.
Ngoku sendirhabaxa, mandikubuze umbuzo, mfundi othandekayo. Ukuba uzibophelele ekusebenziseni i-Twitter njengecebo lokwakha uphawu, zeziphi iindlela zokuziphatha okholelwa ukuba zingonakalisa uphawu lwakho?
Uhlaziyo: Phambi kokuba ndibenethuba lokupapasha le posi, umsebenzisi we-Twitter ekuthethwa ngaye kufuneka ukuba ubonile iiTweets zam ezibukhali ngaye. Uye wavala me. Ndonwabile.
tags: Ukuziphatha kakubi kwe-twitterImpazamo ku-twittertwitter landelaIimpazamo ze-twitter
Izifundo eziHlanu kunye neMfihlo eNkulu kuBhlogi ngokuKhawulezayo